Homeस्वास्थ्यसि,टामोल र भि टामिन सीको चक्की खाँदै कोरोनालाई जित्दै
बुटवल । नेपालमा कोरोनाभा,इरस सं,क्रमणको इपिसेन्टर बनेको प्रदेश ५ मा पछिल्ला दिनहरू सं,क्रमितहरुको संख्या वृद्धि मात्रै होइन, उ,पचारपछि निको भएर जानेहरू पनि बढ्दै छन् । प्रदेशका विभिन्न अस्पतालहरुबाट उ पचार गरेर घर फर्कनेहरूको संख्याले कोरोनाको त्रा,सका बीच प्रदेशवासीलाई थोरै भए पनि खुसी मिलेको छ ।
बाँकेको खजुरास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्या,न्सर अस्पतालबाट शुक्रबार २१ जनाको कोरोनो जितेको भोलिपल्ट हिजो साँझ बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालबाट पनि एकसाथ १० जना सं,क्रमित निको भएर घर फर्किएका छन् ।
बाँके सबैभन्दा धेरै कोरोना सं,क्रमित भएको ठाउँ हो । हिजो साँझ बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालमा निको भएका उनीहरू कपिलवस्तुका हुुन् । दुई साता अघि अस्पताल भर्ना सं,क्रमितको लगातार दुई पटकको रिर्पोट नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज गरिएको बुटवल धागो कारखानासहित कोरोना विशेष अस्पतालका फोकल पर्सन तथा वरिष्ठ कन्सलटेन्ट डा. सुदर्शन थापाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘बिरामीलाई निको बनाएर पठाउँदा खुसी लागेको छ।’
निको भएर जानेहरूले ‘कोरोनाबाट ड,राउनुपर्दैन, सजिलै जित्न सकिन्छ’ भन्ने सन्देश पनि दिएको उनी बताउँछन् । अब आइसोलेसन नपाएर क्वारेन्टाइनमा राखिएको सं,क्रमितलाई राखिने जनाइएको छ । धागो कारखानाको कोरोना अस्पतालमा रुपन्देही र कपिलवस्तुका ३६ जनाले उपचार गराइरहेका थिए ।
सिटामोल र भिटामिन सीको ट्याबलेट खाएर सं,क्रमित फर्किए
नेपालका कोरोना सं,क्रमितमध्ये अधिकांशमा सामान्य लक्षण समेत देखिएका छैनन् । जसबाट आशाका साथै बिरामीहरुलाई त्रा,स र अ,न्यौलता देखिएको छ । हाल सं,क्रमितको कोरोना विशेष अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर चिकित्सकको प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचार हुने गरेको छ । कोरोना विशेष अस्पताल बुटवलका फोकल पर्सन तथा वरिष्ठ कन्सलटेन्ट डा. सुदर्शन थापाका अनुसार संक्रमितलाई चिकित्सकको निगरानीमा राख्ने गरिएको छ । अहिले बुटवलको कोरोना अस्पतालमा ३६ जना रहका छन् । हिजो साँझ कपिलवस्तुका विरामी बिदा भएपछि रुपन्देहीका क्वारेटाईनमा बस्दा कोरोनासं,क्रमण पुष्टि भएका १० जनालाई हिजो राति र आज बिहान गरी ल्याएको थापाले रातोपाटीलाई बताए ।
बुटवलमा उपचार गराइरहेका सं,क्रमित २४ सैं घण्टा स्वा,स्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुन्छन् । बि रामीलाई पर्याप्त तातोपानी र दैनिक ३ पटक खानाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । रो गसँग लड्ने रो गप्र तिरोधात्मक क्षमता बढाउन प्रत्येक दिन फलफूल (स्याउ, केरा, अंगुर) दिने गरिएको छ । प्रत्येक दिन १–१ वटा अण्डा दिने तालिका बनाएको छ । बि रामीलाई तन्दुरुस्त बनाउन हप्तामा २ पटक मासुको व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
डा .थापाले भने, ‘अहिलेसम्म ११ जना यहाँबाट निको भए । उनीहरुलाई हामीले समान्य सि टामोल र भिटामिन सीको ट्याबलेट दिएका थियो अरु औ षधी दिनु परेन ।’ ‘तापक्रम ९९ फरेनाइट पुग्यो भने ज्वरो आएको मानिन्छ तर अहिलेसम्म बि रामीमा ज्व रो देखिएको छैन । बुटवलमा बि रामी त्यति जटिल स मस्या देखिएको छैन,’ डा. थापाले भने । सं क्रमितमा लक्षण देखिएपछि मात्र अस्पतालमा जाने र लक्षण नदेखिए सु रक्षित रुपमा अरुको सम्पर्कबाट टाढै रहेर घरमै वा गाउँ टोलकै व्यवस्थित क्वारेन्टाइनमा बसेर पनि कोरोनालाई जित्न सकिने चिकित्सक बताउँछन् ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. राजेन्द्र खनालले विश्वका धेरै देशमा जटिल स मस्या देखिएपछि मात्र अस्पतालमा पुग्ने गरेकाले नेपालमा पनि लक्षण नभएकालाई घर वा अन्यत्र कुनै सु रक्षित ठाउँमा राख्न सकिने बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. उमाशंकर प्रसाद चौधरीले अस्पतालमा बसेकाहरु ठूलो स मस्या नदेखिएको बताए । उनका अनुसार बाँके जिल्लामा १४२ जना, कपिलबस्तु जिल्लामा ८० जना, रुपन्देही जिल्लामा ४० जना, नवलपरासी पश्चिममा ५ जना, बर्दिया जिल्लामा ३ जना, दाङ जिल्लामा ५ ज गुल्मी जिल्लामा २ जनामा सं,क्रमण भएको पुष्टि भएको छ आजसम्मको अध्यावधिक तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश नं ५ मा कोभिड–१९ को सं,क्रमित संख्या २७७ पुगेको छ । प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये ७ जिल्लामा कोरोना सं,क्रमितहरु भएको पुष्टि भएको छ । १०९ स्थानीय तहहरूलाई नै क्वारेन्टाइन​को व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । प्रदेश सरकारले उनीहरुलाई क्वारेनटाइन बस्नेहरुको लागी खाना र बिरामी परेका सम्बन्धित अस्पतालसम्म पुराउने कार्यविधि बनाएर बजेट पनि दिएको छ ।-रातोपाटी
डिल्लीबजार का,रागारमा कै,दी बन्दीबीच झ,डप, ३ जना घा,इते